पूर्व एन आर एन अध्यक्षलाई डेढ लाखको टेबल (प्रमाणसहित) :: NepalPlus
(डेढ लाखभन्दा बढिको टेबल छेउ उभिएर (देब्रेपट्टी) नयाँ अध्यक्ष कुमार पन्तलाई स्वागत गर्दै पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट)
एउटा राम्रो, बलियो, स्तरिय टेबलको मूल्य कति पर्ला नेपालमा ? २० हजार रुपियाँ ? एकदमै राम्रो टेबल किन्यो भने कति पर्ला त ? ५० हजार ? विश्वभरिका करिब ८० लाख नेपालीका अध्यक्षलाई लौ राम्रै टेबल लैजाउँ । अझ युरोपबाटै स्तरिय टेबल लैजाउँ भनेर युरोपेली कुर्सीनै किनेर लगेपनि कति पर्ला ? बढिमा दुई सय युरो अर्थात् २५ हजार जति । तर अचम्म लाग्ला तपाईलाई । हाम्रा पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टको काठमाडौंस्थित एन आर एन ए सचिवालयमा राखिएको कोठाको टेबलको मूल्य एक लाख ५७ हजार पाँच सय हो ।
(एन आर एनले गत विश्व सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिबेदनको एक भाग)
यो कुनै अनुमान गरिएको रिपोर्ट होइन । एन आर एन ए केन्द्रिय सचिवालयका कर्मचारीले पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टको कोठाका लागि किनेको टेबलको मूल्य हो यो । र यो मूल्य हाकाहाकी वार्षिक आर्थिक प्रतिबेदनमै उल्लेख छ (फोटोमा हेर्नुस्, रातो अक्षरमा) ।
अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा काठको टेबलको मूल्य डेढ लाख भन्दा बढि पर्छ ? यो टेबल कुनै हिरा, मोती र सुनले बनेकोपनि होइन । कतै सुन, हिरा र मोतीको लेपनपनि छैन । सामान्य काठकै टेबल हो । यति सामान्य टेबलको मूल्य नेपालमा कुन फर्निचर सोरुममा पर्छ डेढ लाख भन्दा बढि ?
आफू अध्यक्षमा चुनिएपछि कुमार पन्तले यि टेबल र कुर्सी हटाएर सोफामा बस्ने पद्दती बसालेको स्रोतको भनाई छ । तर उनले यो हिनामिनालाई कसरि छानबिनमा सहयोग गर्छन् भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकि छ ।
त्यसो त, भ्रस्टाचार कति चिजमा भएको छ भन्ने आर्थिक प्रतिबेदन हेर्यो भने कहाली लाग्छ । अफिस फर्निचर एक, अफिस फर्निच दुई, तिन गरेर फर्निचरको मूल्य राखिएको छ । कार्पेट, कुर्सी, टेबल, फिक्सर, अफिस टेबल एक दुई तिन आदि छुट्टाछुट्टै शिर्षकमा खर्च देखाइएको छ । अफिस फर्निचर भनेपछि कुर्सी, टेबल, कार्पेट त्यसैमा पर्छ । तर त्यसरि एक एक तोकेर खर्च देखाइसकेपछिपनि फेरि अदर अफिस ईक्युप्मेन्ट भनेर चार लाख ४२ हजार पाँच सय २९ रुपियाँ ९८ पैसाको अर्को खर्च देखाईएको छ ।
सानातिना खर्चको सूची हेर्न थाल्यो भने त झन अचम्म लाग्छ । एन आर एन सचिवालयका लागि किनेक सामाग्रि छन् कि छैनन् भनेर जाँचबुझ गर्ने हो भने त झनै अचम्म लाग्छ । क्यानन क्यामराको मूल्य ३२ हजार छ सय २५ रुपियाँ छ । यो खासै महँगो त होइन । तर यो क्यामरा कसकालागि कुन प्रयोजनमा किनिएको हो भन्ने कतै छैन । यो क्यामरा कहाँ छ भन्नेपनि कसैलाई पत्तो छैन ।
एउटै टेबलको मूल्य डेढ लाख भन्दा बढि देखाएर को को मिलेर भ्रस्टाचार गरे ? के यति ठूलो रकम भ्रस्टाचार गर्न सचिवालयका सामान्य कर्मचारीले मात्रै आँट गरे होलान् ? यो पटक्कै सम्भव देखिँदैन । यसमा केन्द्रिय स्तरका कोहि न कोहि नेताको संलग्नताबिना संभवै छैन । त्यसो हो भने यो भ्रस्टाचारमा कोको संलग्न छन् ? यसको खोजिनिति र छानबिन गरेर कारवाहि हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
एन आर एन एको गत विश्व भेलामा यो रिपोर्ट लिन नयनियुक्त केन्द्रिय सदस्यहरुले अस्विकार गरेका थिए । यो रिपोर्ट विश्व भेलाबाट पास गरिएको थिएन । यसरि विश्व भेलाले पास नगरेको आर्थिक रिपोर्टमाथि निस्पक्ष तरिकाले छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
(एन आर एन ए भ्रस्टाचार काण्डका अरु आयामकोपनि पर्दाफास हुँदै गर्छ, नेपालप्लस हेर्दै गर्नुहोला, फेसबूकमा पछ्याउनुहोला)